Uyivula njani ifestile yabucala ngalo lonke ixesha sivula iSafari | Ndisuka mac
Uyivula njani ifestile yabucala ngalo lonke ixesha sivula iSafari
Xa imfihlo isisihloko eshushu kwiinyanga ezidlulileyo, abasebenzisi baya belumka ngakumbi xa besabelana ngedatha yabo kwi-intanethi, ngakumbi xa bekhangela i-intanethi. Okwangoku inani elikhulu lezicelo lisinika iinketho ezahlukeneyo zabucala ukuze kube lula ukuhamba ngaphandle kokushiya umkhondo kwikhompyuter yethu. Ifestile yabucala e-Safari isivumela ukuba sihambe ngaphandle kokushiya umkhondo nangaliphi na ixesha lamaphepha ewebhu esiwatyelelayo kwaye ukuba sinomona kakhulu ngemfihlo yethu, sinokumisela isikhangeli ukuze sihlale sivula itab yabucala xa siqhuba.
1 Yintoni ukukhangela ngasese
2 Vula ifestile yabucala ngalo lonke ixesha sivula iSafari
Yintoni ukukhangela ngasese
Ngalo lonke ixesha sisenza ukukhangela ngasese nge-Mac, i-iPhone, i-iPad okanye i-iPod touch, I-Safari ithintela iiwebhusayithi ekulandeleleni umsebenzi wethu ngaphezu kokungagcini nayiphi na idatha yokuhamba kwisixhobo. I-Safari ikwabonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuphucula ubumfihlo bokubrawuza kwethu, iindlela esivumela ukuba silawule ukusetyenziswa kweSafari kwidatha yethu.
Vula ifestile yabucala ngalo lonke ixesha sivula iSafari
Okokuqala kufuneka sivule i-Safari kwaye siye kwifayile ye- Okuthandayo isikhangeli.
Emva koko siye kwithebhu ngokubanzi.
Ngoku siya phezulu I-Safari ivula nge: kwaye ucofe kwi-drop-down engezantsi, apho kufuneka sikhethe iWindows entsha yabucala.
Ukuze utshintsho lusetyenziswe, kufuneka sivale ngokupheleleyo isikhangeli kwaye siyivule kwakhona ukubona ukuba ithebhu entsha evula ngombala omhlophe iyakusibonisa uphawu oluphezulu olusazisa ukuba sisebenze ngokufihlakeleyo kwaye oku kuthetha ukuba ISafari ayizukukhumbula ukubonwa kwephepha, imbali yokukhangela, okanye ulwazi lokugcwalisa ngokuzenzekelayo olufumaneka kwi-iCloud Keychain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyivula njani ifestile yabucala ngalo lonke ixesha sivula iSafari
Kwaye igama lenguqulelo elandelayo ye-macOS iya kuba ...
I-Atento, isicelo esivelisayo sokuvelisa iMac yethu